Izindaba - Ungalihlanza futhi uligcine kanjani itiye ibhokisi ngobuhlakani
Ungalihlanza kanjani futhi uligcine ibhokisi letiye ngobuhlakani
Abantu bavame ukuthi: “Izinto eziyisikhombisa ukuvula umnyango, izinkuni zokubasa, irayisi, uwoyela, usawoti, usoso netiye leviniga.” Lokhu kukhombisa ukuthi itiye selingene langena kuzo zonke izizinda zempilo. Ngakho-ke abantu baseChina bayathanda ukuphuza itiye, ngakho ngabe nonke niyazi ngokugcinwa kwamabhokisi okupakisha etiye?
1. Zama ukugwema ukuthintana namabala kawoyela ebhokisini likathayi. Uma ngephutha uthola ukungcola okunzima ukukususa, ungayikhuhli ngento enzima. Ungafaka umlotha kagwayi othulini bese usula ngendwangu kakotini ukuze ususe amabala. Amabala endawo Ingasulwa ngendwangu emhlophe kakotini ecwiliswe ekupholiseni okunamathiselwe.
2. Ibhokisi letiye elinamathe angaphezulu angahlanzwa ngamanzi afudumele anensipho; ngenkathi ibhokisi letiyi elinendawo ebushelelezi lingasulwa ngamanzi okuwasha asezingeni eliphakeme ukuze kugcinwe ukukhanya okuhlala njalo okukhanyayo.
3. Ungafaki ukudla noma isiphuzo ebhokisini letiye ubusuku bonke ukugwema ukungcolisa ubuso. Ngemuva kokuhlanza ibhokisi letiye, qiniseka ukuligeza kahle bese ulomisa ngesikhathi, ngoba okokuhlanza okusalayo namaconsi amanzi kuzolimaza ubuso bebhokisi letiyi.
4. Gwema ukuthinta ibhokisi letiye elinamalangabi noma ukulibeka ezindaweni ezifudumele. Lapho ibhokisi letiye lifudunyelelwa ngaphezu kuka-160 degrees Celsius, ukuthungwa kwalo kuzoba brittle futhi izitsha zizoxebuka zibe yimpuphu noma okufana nesitsha. Ngakho-ke, umakhi webhokisi letiye uncoma ukuthi uyiphathe itiye Ungafudumezi ubuciko bebhokisi lensimbi ngaphezu kwe-160 degrees Celsius ukugwema ukulimala.
Empeleni, akunzima ukuhlanza nokugcina ibhokisi likathayi, futhi akulula ukusho ukuthi lilula. Ngokuyinhloko kuxhomeke ekutheni ulihlanza futhi uligcine kanjani itiye ibhokisi.
I-Ring Pull Can Opener Uzipho, Ikesi Lesitoreji se-Cd, Ngokwezifiso Tin Ibhokisi, Ibhokisi leTin, Ukupakisha kweTin Box, Ibhasikidi Yesitoreji Sensimbi EsineLid,